DHAGEYSO:Abaabul dagaal oo ka bilowday magaalada Afmadow. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Abaabul dagaal oo ka bilowday magaalada Afmadow.
Star FM January 8, 2019
Madaxweynaha maamulka Jubaland iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa wuxuu halkaas ka bilaabay kulamo kala duwan oo looga arinsanayo sidoo laguq aadi lahaa guluf Dagaal oo ka dhan ah xooggaga AL-shababa ee deegaano gobolkaas ka mid ha ku sugan.
Axmed Madoobe waxaa safarkiisa ku wehliyay xubno ka mid ah golihiisa wasiirad,xildhibaano iyo Taliyeyaal ciidan,wuxuun safarkiisu qayb ka yahay qorshe maalmihii la soo dhaafay magaalada Afmadow loogu daabulayay ciidamo dheeraad ah oo la doonayo inay qaadaan howlgalo balaadhan oo AL-shababa looga saarayo deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo guud ahaan gobolka jubada dhexe.
Madaxweynaha Jubaland ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee uu degmada Afmadow u tagay ay tahay sidii uu kulamo kala duwan ula qaadan lahaa waxgaradka iyo Saraakiisha amaanka ee halkaasi ku sugan.
Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa maalmihii la soo dhaafay waday qorshe dagaal oo lagu doonayo in ururka AL-shabaab looga saaro gobolada Jubooyinka waxaana qaybaha kala duwan ee ciidanka Soomaaliya ee halkaas ku sugan la faray inay qaadaan guluf dagaal oo ka dhan ah xoogga dowlada diidan.
← Dowlada Maraykanka oo faahfaahisay duqaymo ay ka fuliyeen Koonfurta Soomaaliya.
Madaxa Bangiga Adduunka oo iscasilaya →